Impendulo ye-UNWTO eKenya: Ngubani onokumisa lo Nobhala-Jikelele uZurab Pololikashvili?
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Impendulo ye-UNWTO eKenya: Ngubani onokumisa lo Nobhala-Jikelele uZurab Pololikashvili?
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zikaRhulumente • IKenya Breaking News • iindaba • abantu • ISpain Iindaba Eziphambili • komzila Ngoku
Ileta isenziwa kwiKomkhulu le-UNWTO eMadrid.
Le leta ilindeleke ukuba ithi HAYI kwisindululo saseKenya sokusingatha iNdibano yeZizwe eziManyeneyo.
A ngoku izakuba sisibetho ngokuchasene nokhenketho, impikiswano kunye nokuzingca.
Ngaba umntu unokumisa ukuveliswa kwale leta?
Emva kokuba i-UNWTO yazise amazwe angamalungu ukuba iMorocco ayinakuba yindawo yeNdibano yeZizwe eziManyeneyo ezayo, iKenya kwangolo suku lunye yanikezela ukusingatha umsitho endaweni yoko.
Ukuqhagamshelana naye eMoroccoIiNdaba zakutshanje FR, Zoubir Bouhoute, ingcali kwezokhenketho kunye nomlawuli weBhunga lePhondo lezoKhenketho (CPT) lase-Ouarzazate, uyazisola ngezi zigqibo ezimele intlekele kukhenketho lwaseMorocco oluzama ngandlela thile ukuphilisa amanxeba abangelwa yintlekele ye-Covid-19.
IKenya yayiyeyesibini kumgca xa iMorocco, iPhilippines kunye neMorocco inikezela ukuba ibambe iNdibano Jikelele kwi-GA yokugqibela eSt. Petersburg kwiminyaka emibini edlulileyo. Ngoku lithuba laseKenya?
Ayiyomfihlo, ukuba ukususa umsitho usuka eMorocco ubuyela eMadrid kuyimpumelelo enkulu kuNobhala-Jikelele we-UNWTO.
NgoJanuwari iBhunga lesiGqeba esiLawulayo lahlangana eMadrid phakathi kwerekhodi lokuqhambuka kweCorona, ixesha lokufika ekhaya, kunye nemeko kaxakeka yemozulu. Kwakuyinto yonke yokucebisa uZurab Pololikashvili kwikota yesibini njengeSG. Nkqu nenkulumbuso kaZurab yaseGeorgia weza wamema bonke abathunywa abavotayo kwisidlo sangokuhlwa ngaphambi konyulo, eshiya umgqatswa ekuphela kwakhe ekhankasela uZurab ebumnyameni.
Abagqatswa aba-5 abongezelelekileyo babenemiba yolawulo oluchongwe yi-UNWTO Secretariat, abakwazanga ukuphinda bangenise amaphepha kunye nephulo elichasene neZurab ngenxa yexesha elifutshane elibekwe endaweni emangalisayo wonke umntu.
Ukuba neNdibano yeZizwe eziManyeneyo kwisixeko esinye kuya kuphakamisa umbuzo wobuqhophololo obunzulu ngakumbi kwinkqubo yonyulo lukaNobhala-Jikelele. INdibano yeZizwe eziManyeneyo kufuneka ivotele kwisindululo seBhunga lesiGqeba esiLawulayo kwaye iqinisekise.
Okwangoku, uZurab Pololikashvili pudlale indima ephindwe kabini kutsha nje imeko ebandakanya iSaudi Arabia. Oku kubangele impikiswano phakathi kweSpain kunye neSaudi Arabia malunga nokusingatha ikomkhulu le-arhente ye-UN Affiliated. UNobhala-Jikelele weZizwe Ezimanyeneyo wabandakanyeka.
eTurboNews isanda kwaziswa ngumthombo othembekileyo ngaphakathi kwe-UNWTO eMadrid:
Ileta ibhalwa yi-UNWTO Secretariat kuMphathiswa waseKenya namhlanje, iphendula kwisiphakamiso somphathiswa sokubamba iNdibano Jikelele eKenya.
Le leta kulindeleke ukuba ibulele uMphathiswa uNajib Balala ngesithembiso sakhe sobubele sokusingatha iNdibano yeZizwe eziManyeneyo.
Ileta iya kuba ngu-HAYI ngenxa yomgaqo-nkqubo wexesha, ibhekisela kumda wexesha leentsuku ze-40, nangona uMphathiswa uBalala ephendule kwi-UNWTO kwiiyure ze-24.
ngaphakathi Iiyure ezingama-24 zaseKenya zithumela isicelo kwi-UNWTO Madrid eSunday, ilizwe lalisele lilandela iKenya. Ibiyingxoxo yokuqala phakathi kweenkokeli zeBhodi yezoKhenketho yase-Afrika ngeCawe.
Ukuqwalasela imeko indlela uZurab atyholwa ngayo ngobuqhetseba bonyulo, ukujongela phantsi amazwe angamalungu kunye ne-HQ move, kuya kuba nomdla wakhe ukuba angabangela enye imeko apho amazwe angamalungu angabona ngokucacileyo i-UNWTO yonke into malunga nonyulo lwakhe, kwaye kungekhona ngokufumana ukhenketho. ubuyele endleleni.
Xa ebuzwa, uGloria Guevara, owayesakuba yi-CEO ye-WTTC kunye nomcebisi ngoku kuMphathiswa wezoKhenketho eSaudi Arabia uxelele. eTurboNews:"Ndizama ukudibana ngoku."
Namhlanje inokuba lusuku lwamandla ngoLwesibini lwe-UNWTO, Kenya, kunye neHlabathi lezoKhenketho.
Oktobha 31, 2021 kwi-06: 10
UZurab Pololikashvili ungunobhala-jikelele omtsha we-United … ivoti ukunqanda “intloni” kunye “nokuhlonipha ingqibelelo”. Okubaluleke ngakumbi, izithintelo zokuhamba zikwathintela ukhenketho ekunikezeni amandla alo okwakha ikamva elingcono lomntu wonke.